Into ekufuneka uyazi malunga nokuChaphazela isiyobisi iLinaclotide
1. Yintoni iLinaclotide (iLinzess)?
2. Ngaba iLinaclotide isetyenziselwa ntoni?
3. Yintoni indlela yokusebenza kweLinaclotide?
4. I-Linaclotide mayisetyenziswe njani?
5. Ithini ithamo leLinaclotide (Linzess)?
6. Zeziphi iziphumo ezinokubangela iLinaclotide?
7. Ngawaphi amachiza okanye izongezo eziza kusebenzisana neLinaclotide?
8. Yintoni umahluko phakathi kweLinaclotide kunye ne-lubiprostone?
9. Loluphi olunye ulwazi malunga neLinaclotide endifanele ndiyazi?
I-Linaclotide (iLinzess) sisiyobisi esisemthethweni esikhutshwa yi-FDA esisetyenziswa rhoqo kwizigulana ezikhulu ezinengxaki yokupheliswa okungapheliyo okanye ukupheliswa ngenxa yesifo sokuqaqanjelwa kwamathumbu. I-Linaclotide 851199-59-2 iza phezulu kuluhlu lodidi olutsha lweziyobisi ekubhekiswa kulo njenge-guanylate cyclase-C agonists.
Igama leLinaclotide igama nguLinzess kwaye kubalulekile ukukhumbula ukuba okwangoku akukho nguLinaclotide generic version. Ke, ukuba ufuna iLinaclotide yentengiso okanye oyisebenzisayo, jonga abathengisi beziyobisi kwi-Intanethi abanokuthi bathengise ngokungekho mthethweni I-Linaclotide generic iziyobisi.
I-Linzess yi-guanylate cyclase-C agonist kunye ne-14-amino acid peptide. Igama leekhemikhali L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-cyarainyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonyl-glycyl- I-L-cysteinyl-L-tyrosine, cyclic (1-6), (2-10), (5-13) -tris (disulfide).
Ifomula yayo yemolekyuli yi-C59H79N15O21S6 ngelixa ubunzima beemolekyuli yi-1526.
I-Linaclotide powder imhlophe qhwa-mhlophe kwaye inyibilikiswa kancinane emanzini. Ingakwazi nokunyibilikisa kancinci kwi-chloride emanzini (i-0.9%).
Yokugqibela Linzess ikwimo yeebhlothi zeegelatin ezinzima eziqukethe ubuhlalu obudityanisiweyo beLinaclotide. I-calcium chloride dihydrate, i-L-leucine, i-titanium diokyidi, i-microcrystalline cellulose, ijeliatin, kunye ne-hypromellose ziphakathi kwezithako ezisebenzayo eLinzess
Xa kuziwa ekusebenziseni i-Linaclotide, abantu bayisebenzisa njengonyango lwemicimbi ethile yamathumbu efana nesifo samathumbu esinganyanzelekanga esibonakalisa ukuqunjelwa kunye nokuqunjelwa okungapheliyo kwe-idiopathic.
I-Linaclotide ye isifo esilumkileyo esiswini iimpawu
I-irritable bowel syndrome (IBS) kukuphazamiseka kwexesha elide okuthintela amathumbu ukuba asebenze ngendlela eqhelekileyo. Esi sisibonakaliso seLinaclotide sikwabizwa ngokuba sisiponji se-spastic kwaye ngamanye amaxesha isifo se-bowel esisebenzayo. Iimpawu eziphambili zeso siphazamiso kukuqunjelwa, isisu sohudo kunye nentlungu esiswini ngokunyanzelwa okanye ukutshintshana neswekile.
Kwisifundo seklinikhi sokufumanisa ukusebenza kweLinaclotide yokukhululeka kweempawu zesifo samathumbu esibuhlungu, izigulana zabantu abadala zasetyenziswa kwizilingo ezimbini ezingahleliwe, ezinokulinganisa ezininzi. Isilingo sokuqala sabandakanya izigulana ze-800 ezafakwa kwi-290 mcg imihla ngemihla kunyango lwe-linzess ngelixa i-804 yabelwa eyesi-2 yesibini eyayikwi-placebo.
Zonke izigulana ezisetyenziswa kula maqela mabini zidibene ne-IBS Rome II criteria kwaye kulindeleke ukuba zifezekise amanqaku asezantsi esifo esibuhlungu se-3 ubuncinci kwizinga le-zero ukuya kwishumi kwaye ubuncinci abathathu bokuhamba kwamathumbu ngokuzimela veki nganye kwonyango. ixesha
Ekupheleni kwexesha lonyango, abaguli ababekwisifundo sokunyanga ngokungapheliyo bafumana iimpawu eziphuculweyo ze-BIS ngokuthelekiswa neqela labo le-placebo ngokwe:
Ukuhamba kwamathumbu rhoqo
Inani lexesha kunye nomzamo womzimba umntu awusebenzisayo ukudlula isitulo.
Ukukhululeka kwintlungu esiswini
Oko kuqinisekiswe ngokwenene yinqobo yeLinaclotide njengonyango olusebenzayo lwe-BIS.
I-Linaclotide ye Iimpawu ze-Idiopathic Constipation (CIC) ezingapheliyo
Kwisifundo kuvavanywa ukusebenza kakuhle kweLinzess ye CIC iimpawu zokuphatha, izigulana zabantu abadala zokugonyelwa idiopathic ezingapheliyo zabekwa kwizilingo ezingahleliweyo, izilingo zekliniki ezininzi, ngokufanayo nezifundo ezichazwe ngasentla ze-BIS.
Isigulana ngasinye besikhe sahlangabezana ne-II II ye-II yokusebenza yokusebenza eguqulweyo kwaye safumana i-72mg, i-145 mcg Linzess, i-290 mcg Linzess okanye unyango lwe-placebo yonke imihla ngalo lonke ixesha leveki ye-12.
Ekupheleni kwexesha lokunyanga, abaphandi baqaphela ukuphuculwa kweempawu ze-CIC phakathi kwabaguli ababeselunyango lweLinzess xa kuthelekiswa nabo babekwi-placebo. Ngokukodwa, banamava ophuculo olukumgangatho ophezulu ngokumalunga nokuhamba rhoqo kwesitulo, ukungaguquguquki kwesitulo kunye nexesha lokuhamba kwamathumbu.
Kuzo zontathu iidosi zeLinzess, zineziphumo ezibi kakhulu ngaphandle kokubonelela ngeempawu zeCIC. Oku kungqina isibonakaliso seLinaclotide sokwazi kwayo ukunyanga i-CIC.
Ngokungafaniyo namanye amayeza asetyenziselwa ukunyanga le miba sele ichaziwe ngaphambili, inkqubo yeLinaclotide yahlukile- ayifakwa emzimbeni wakho. Umatshini weLinaclotide yenzeka ngokukodwa kumathumbu akho ngokwandisa ulwelo, ngenxa yoko kuphucula iintshukumo zamathumbu kunye nokunciphisa iintlungu ezinokubangelwa yingxaki yamathumbu.
I-Linaclotide (i-Linzess) yenza ukuba amathumbu avelise i-fluid ngakumbi ngokwandisa imveliso ye-cyclic guanosine monophosphate.
Xa i-Linaclotide isebenzisa amandla ayo ukwandisa i-fluid emathunjini akho, ukutya kuhamba ngesisu ngokukhawuleza kwaye ukuthungwa kwesitulo kuyaphucuka. Oku kuphucula iimpawu zokuhamba kweempawu ezinxulumene nokuhamba kwamathumbu njengokuqunjelwa, isisu / ukuqaqamba kwesisu kunye nokuziva okungaphelelanga kwamathumbu.
Xa usenza i I-Linaclotide ithengeEwe, ngokuya nonyango lukagqirha, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba ufunda isikhokelo samayeza oza kunikwa ngusokhemesti wakho ngaphambi kokuthatha iyeza. Isikhokelo siya kukuxelela idosi efanelekileyo yeLinaclotide, ixesha elifanelekileyo lomthamo kunye nexesha lesifundo esinyusiweyo.
Kwimeko apho ufuna nayiphi na ingcaciso kuyo Idosi ye-Linaclotide, ungathandabuzi ukuqhakamshelana nodokotela wakho okanye usokhemesti ukunqanda imiphumo emibi yeLinaclotide okanye ukuhlangana kweLinaclotide.
Ukuba ngonyango lomlomo, i-Linaclotide kufuneka ithathwe ngomlomo. Kuya kufuneka usithathe ngelixa isisu singenanto, ukhetha imizuzu ye-30 ngaphambi kokuthatha isidlo sakho sokuqala ngosuku. Isiyobisi sokugqibela seLinaclotide sikwisimo se-capsule kwaye kufuneka siginywe siphelele. Akufanele uphule okanye uhlafuna iicaphule zeLinaclotide.
Nangona kunjalo, kwimeko yokuba uzame ukuginya iipotile kodwa ngaphandle, unokuzivula kwaye udibanise iziqulatho kwi-apilesauce spoonful. Emva koko ginya ukudibanisa ngokukhawuleza kwaye njengoko kunjalo-musa ukuhlafuna. Hlanganisa kuphela isixa omele ukusithabatha ngelo xesha kuba ukugcina umxube kuya kwenza ukuba iziyobisi zingasebenzi kakuhle.
Kwimeko apho ungenayo applesauce, ungasebenzisa amanzi njengenye indlela. Linganisa i-ounce enye okanye i-30mm yamanzi, vula iicaphule ze-Linaclotide zeediphu kwaye ubeke umxholo emanzini. Khwelisa umxholo wamanzi- i-Linaclotide malunga nemizuzwana ye-20 uze uyisele kwangoko. Kanye njengomxube weapilesauce, musa ukuhlafuna umxholo- ukugwinya ngokupheleleyo.
Kwimeko apho amayeza enzelwe ukuhanjiswa nge-nasogastric okanye ityhubhu yesisu, funa isikhokelo kulawulo kwi-pharmacist yakho okanye kugqirha. Nangona kunjalo, nantsi inkqubo eqhelekileyo yolawulo lwebhubhu.
Linganisa i-30 ml yamanzi acocekileyo kunye namaqondo obushushu egumbi kwaye uwafake kwisitya esicocekileyo.
Vula ityhubhu yeLinaclotide kwaye ukhulule umxholo wayo wonke (ubuhlalu) emanzini
Mid phakathi kwamanzi kunye neebhulukhwe zeLinaclotide ngokususa umxube ngobunono kungabi ngaphantsi kwemizuzwana ye-20.
Zoba umxube wamanzi we-Linaclotide wamanzi kwisirinji efanelekileyo kunye nesipili esifana neso catheter kunye nobungakanani obufanelekileyo. Emva koko uchithe umxube kwi-nasogastric okanye ityhubhu esiswini esetyenziswa sisigulana ngokufaka ngokuqinileyo kodwa uxinzelelo olukhawulezileyo lwe-10 mL / 10 imizuzwana kwisirinji.
Kwimeko apho ezinye iilokhwe zeLinaclotide ezisele ziqulathe isikhongozelo, yongeza i-30ml zamanzi acocekileyo kuyo, ziwugungxule lo mxube, kwaye uziphathe njengoko bekuchaziwe ngaphambili.
Nje ukuba ugqibile ngokulawula umxube weebhulukhwe zeLinaclotide kunye namanzi, sebenzisa ubuncinci be-10 ml yamanzi ukukhanyisa ityhubhu yolawulo.
Idosi efanelekileyo yeLinaclotide iyahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye, ngokuxhomekeke kwimeko ekucetywa ukuba inyangwe kunye nokuphendula komnye umntu amayeza. Kwakhona, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ichiza akufuneki lisetyenziswe ngabantu abangafikanga kwiminyaka ye-18.
Abantwana abancinci basengozini enkulu yokufumana ubunzima obukhulu Imiphumo emibi ye-Linaclotide Ukuba bayalisebenzisa eli chiza.
(1) Umsebenzi oMdala wabaDala weSifo esiDabukisayo seTowel
Kumntu omdala onengxaki yokuchaphazeleka kwi-Bowel Syndrome ehamba kunye nokuqhina, kufuneka athathe idosi ye-Linaclotide ye-290 mcg yonke imihla. Njengoko kuchaziwe ngaphambili, iyeza kufuneka lithathwe kwisisu esingenanto. Ukuqinisekisa ukuba, yithathe ngaphambi kwesidlo sakho sokuqala ngosuku.
(2) Idosi yokuSebenzisa abaDala yokuSebenzisa
Ngokwe-US yokuTya kunye nokuLawula iziyobisi, i-dose ye-Linaclotide ecetywayo yomntu onesifo esingapheliyo sokupheliswa kwe-idiopathic (CIC) yi-72 mcg.
Nangona kunjalo, idosi ye-mcg ye-145 inokunconyelwa kwisigulana esikhulileyo esine-CIC, ngokuxhomekeke kwinkcazo kunye nokunyamezela. Ungaphuma Uvavanyo lwe-linzess 72 mcg ukufumana uluvo lokuba isebenza njani idosi kunye nabasebenzisi abaye baxhamla kuyo.
Ngokwe-linzess eyahlukeneyo ye-72 mcg uphononongo, phakathi kwezinye iindlela zokutya ngokubhekisele kunyango, isiguli esinemicimbi yezempilo sele sikhankanyiwe kwaye sijonge phambili ekuxhamleni kwinto esinokubakho kufuneka silisebenzise rhoqo ukufikelela kwiziphumo ezifunwayo. Ngaphandle koko, kufuneka ithathwe ngexesha elifanayo yonke imihla ngexesha lonke lokufunda elimiselweyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-Linzess inokubangela ukusebenzisana kweLinaclotide kunye neziyobisi ezahlukeneyo. Ngenxa yoko, kuya kufuneka uxele kugqirha wakho malunga nalo naluphi na unyango okhoyo ngoku ngaphambi kokuba uqale ukulisebenzisa (i-Linaclotide).
Kwakhona, abafazi abakhulelweyo kufuneka basebenzise isilumkiso esikhulu xa bethatha ukuthatha i-Linaclotide kuba iyeza linokubeka ingozi enkulu emntwaneni. Kuya kufuneka baqwalaselwe ngugqirha ukuze baqinisekise ukhuseleko lwabo kunye neentsana zabo ezingekazalwa ukuba balasele amayeza. Ityala elifanayo liyasebenza koomama abancancisayo kunye nabo unqwenela ukukhulelwa ngelixa usebenzisa iyeza.
Nangona kunjalo, nokuba banayo i-CIC okanye i-Irritable Bowel Syndrome, abaguli abangaphantsi kweminyaka yobudala be-6 akufuneki bathathe I-Linzess powder (851199-59-2). Uvavanyo lweklinikhi luphawule ukuba iyeza labangela ukufa kwiigundane ezincinci ezineminyaka engaphantsi kweminyaka ye-6 ebantwini.
Kananjalo, iyeza elichasene nezigulana ezingafikanga iminyaka njengoko zibabeka emngciphekweni omkhulu wokuhlaselwa sisifo sohudo kunye neziphumo ezibi ezinokubakho.
Ngaphandle koko, kukho idatha yekliniki ebonisa ukhuseleko kunye nokusebenza kakuhle kwe-linzess phakathi kwabaguli abaneminyaka eyi-6 ukuya kwiminyaka ye-17. Kananjalo, kwimeko yomntwana okanye umntwana okwishumi elivisayo engaphantsi kweminyaka ye-18 ofuna isiqabu se-ICI okanye i-BIS, ingcebiso kagqirha kufuneka ifunwe kuqala.
Ungathabatha ukuya kwiiveki ezimbini ngaphambi kokuba ufumane impumuzo ngenxa yeso ichiza. Ke, yiba nesineke kancinci ngayo. Qhubeka ukuyisebenzisa njengoko kuyalelwe.
Nangona kunjalo, ukuba ngaba uphawu lwakho aluphucuki okanye luye lube mandundu ngakumbi emva kokusebenzisa i-linzess, musa ukuthatha idosi engaphaya kwesixa esimiselweyo. Akufanelanga ukwenze oko nangayiphi na imeko. Endaweni yoko, yazisa ugqirha wakho ukuba abonise unobangela ongekho mgangathweni wechiza kunye nengcebiso kwikhosi elandelayo yenyathelo.
Kuyacetyiswa ukuba ungasebenzisi i-Linaclotide kwimeko yokuba ngaba ungahambelani nayo okanye amathumbu akho abe nesithintelo.
Ukuba kunokwenzeka uphulukane nedosi yeLinaclotide, sukuzama ukwenza idosi ephosiweyo. Khohlwa malunga noku kwaye uqhubeke uthatha imithamo elandelayo ngexesha elicwangcisiweyo.
Kwimeko apho wena okanye umhlobo wakho omthandayo ethatha idosi enkulu ye-Linaclotide (isddose), isigulo kufuneka siziswe ngokukhawuleza kogqirha. Ngenye indlela, ungaqhakamshelana neenkonzo zoncedo lwetyhefu ngokutsala i-1-800-222-1222.
Ngokutsho ngokwahlukeneyo Uhlaziyo lwe-Linaclotide kunye nezifundo zesayensi, ezi zilandelayo ziziphumo eziqhelekileyo zeLinaclotide:
Intlungu ethambileyo yesisu okanye ukungonwabi
Iimpawu ezibandayo ezifana nokuxinana / impumlo egudileyo, umqala obuhlungu wento okanye ukudumba
impumlo okanye into egudileyo
Nangona kunqabile, unokufumana enye yezi ziphumo zeLiaclotide zilandelayo:
Ukudakumba kabukhali okanye ukuqhubeka kwesisu
Urhudo oluhamba nesiyezi okanye imvakalelo ekwenza uzive ngathi kunokwenzeka ukuba uphume
Ukomelela okuqhubekayo kunye nokungapheliyo
Intlungu enkulu yesisu
umnyama, igazi, okanye isitya samanzi
ubuso, imilebe, ulwimi, okanye ukudumba komqala
Kuya kufuneka ukuba ufune uncedo olungxamisekileyo ukuba ngaba ufumana ukudumba kwezi ndawo sele zikhankanyiwe, ingxaki yokuphefumla okanye imingxunya.
Kwimeko yezinye iziphumo ezinqabileyo zeLinaclotide, kuya kufuneka uyeke ukusebenzisa iyeza kwaye uqhagamshelane nodokotela wakho ngokukhawuleza ukuba ufumane isikhokelo.
Ukusebenzisana kweLinaclotide inokwenzeka kwimeko yokuba i-Linaclotide isetyenziswe kunye nezinye iziyobisi kubandakanya izinto ezibalaseleyo, iimveliso zeevithamini, iimveliso zamachiza kunye namayeza amiselweyo. Amanye amayeza athe axelwa ekunokubangela ukuhlangana kweLinaclotide aquka:
Aspirin Amandla aphantsi
I-Dulcolax (unxibelelwano oluncinci)
I-Metamucil (unxibelelwano oluncinci)
ILevothyroxine (intsebenzo ephakathi)
8. Yintoni umahlukos Phakathi I-Linaclotide kunye ne-lubiprostone?
bobabini I-Linaclotide kunye ne-lubiprostone Ngaba ziyobisi ezivunyiweyo ze-DFA zokungqunjelwa idiopathic esingapheliyo kunye nesifo esinganyanzelekanga samathumbu kubantu abadala. Ukuba ufuna ukunyuka kokuhamba kwamathumbu, unokukhetha naziphi na kwezi zimbini.
Nangona kunjalo, banamanani umahluko ngokwe:
(1)Iiklasi zabo ezifanelekileyo
I-Lubiprostone yodidi lweziyobisi olwaziwa ngokuba lutshanziso lwe chloride. Kwelinye icala, uLinaclotide (uLinzess) lilungu lodidi lweziyobisi ekubhekiswa kulo njenge-guanylate cyclase-C agonists.
(2)Idosi yemihla ngemihla
Ngelixa ithamo le-Linaclotide elicetyiswayo kufuneka lithathwe kanye ngosuku, ngakumbi ngaphambi kwesidlo sakusasa, iLubiprostone ihlala ithathwa kabini ngemini. Ke ngoko, ukuba unengxaki yokukhumbula ukuthatha amayeza akho yonke imihla, i-Linaclotide iya kuba yeyona nto ilungileyo kuwe.
Enye into eyahlulahlula ezimbini ngokwexabiso ledosi yimali umntu anokuthatha ngexesha elinye. Umzekelo, kwi-CIC, idosi enye ye-Linaclotide iyacetyiswa yi-72 mcg ngelixa yona iLubiprostone yi-8 mcg.
Omnye umahluko iLinaclotide powder (851199-59-2) kunye ne-lubiprostone kukunxibelelana kweziyobisi. Malunga nokusebenzisa iziyobisi i-58 ye-whopping eyaziwa ngokusebenzisana neLinaclotide, ubudlelwane beLinaclotide bungaphezulu kakhulu ngokuthelekiswa ne-lubiprostone enxulumana nokudibana nje kwesiyobisi esinye.
I-Linzess yavunywa nge-30th ka-Agasti 2012 ngelixa ukuvunywa kwe-lubiprostone kwenzeka ngoJanuwari 31, 2006
Xa unokutya esiswini sakho kwaye uthatha i-Linaclotide, iimpawu zakho zesisu ezifana neswekile, iintlungu zesisu kunye nerhasi zinokuba zisihla, ngenxa yokusebenzisana kukaLinaclotide-nokutya. Kwimeko apho ukhula kakhulu urhudo kwaye uthatha elinye iyeza lomlomo, ukumiliselwa kokuchaphazeleka kungaphazamiseka kakubi.
Ukunciphisa ukunganyamezeli esiswini ngenxa yokuhlangana kokutya, iLinaclotide imele ukuthatyathwa kwisisu esingenanto.
Kwelinye icala, kukho isigameko esingqinisisiweyo sesayensi sokudibana kweLubiprostone-ukutya. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba akukho nto inokwenzeka. Ngenxa yoko, kubalulekile ukuba ufune ukucaciselwa ngakumbi ngexesha elililo lokusebenzisa iyeza kumboneleli wakho wezempilo
(6)Umngcipheko wokukhulelwa koomama abakhulelweyo
Ukuza kuthi ga ngoku, icandelo lophando olufanelekileyo kunye nokuphononongwa kweLinaclotide kubonisa ukuba iLubiprostone inokubangela ingozi kwisibeleko ukuba umama okhulelweyo uthatha iyeza. Ngakolunye uhlangothi, akukho sifundo esinye esibonisa ukuba i-Linzess inokubangela ukulimala kwesibeleko ukuba kuthathwa ngumfazi olindelekileyo.
Izazinzulu zithi olu luvavanyo lokuthatyathwa kwamayeza ngendlela ephantsi. Nangona kunjalo, umngcipheko awunakugqitywa ngokupheleleyo njengoko uphando oluthe kratya lusaqhubeka ngoku ukuqinisekisa ukhuseleko okanye ingozi yesiyobisi kumntwana ongekazalwa.
Ke, nokuba unomdla wokuthatha i-Lubiprostone okanye i-Linaclotide, umama okhulelweyo kufuneka abonane nodokotela malunga nokufaneleka kwesigqibo.
Ngaphandle kwe-CIC, i-lubiprostone iyakwazi b
e isetyenziswe njengonyango lokupheliswa kokupheliswa kwe-Opioid (I-OIC) kunye nesifo esinganyanzelekanga samathumbu ngokuqunjelwa kubafazi abaneminyaka eyi-18 ubudala.
Xa kuziwa kwi-Linaclotide, ngaphandle kwe-CIC, ikwanyusa isifo samathumbu esinganyanzelekanga esihamba kunye nokuqhina (IBS-C) kubafazi nakumadoda. Ayisetyenziswa njengonyango lwe-OIC.
Xa kuza ku Iindleko zeLinaclotide, liphezulu kancinci kune-lubiprostone. Okwangoku, indleko zeLinaclotide zimalunga ne- $ 450 ye-30 ye-capNUMX ngelixa i-60 yecaphule ye-lubiprostone inokubiza malunga ne- $ 396. Nangona kunjalo, amaxabiso ayahluka ukusuka kumthengisi ukuya komnye kwaye amaxesha ngamaxesha.
Umvelisi weLinaclotide yinkampani eyaziwa ngokuba yiAllergan ngelixa i-lubiprostone iyimveliso yenkampani yeSupampo.
Ngaphandle kokungafani koku kungasentla, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-lubiprostone kunye neLinaclotide zithengiswa kubathengi kwifom ye-capsule yomlomo kwaye abanayo i-generics. Zombini, iziyobisi zombini zifuna ukuba uGqirha ammkele umntu ukuba azifumane kuye nawuphi na umthengisi.
9. Intoni lolunye ulwazi malunga I-Linaclotide kufanele ukuba ndazi?
Njengalo naliphi na elinye ichiza, iLinaclotide powder (851199-59-2) okanye iicephetshi kufuneka zigcinwe kude kufikelele kumntwana ukubathintela ukuba bangayixhaphazi. Kananjalo, ekubeni ngugqirha onikwa amayeza, abanye abantu banokuhendwa ukuba babelane nabanye ngechiza ukuphepha ukubanoxinzelelo lokuya kwagqirha.
Nangona kunjalo, ukwabelana ngeLinaclotide kuyingozi kuba ugqirha kufuneka abeke izinto ezininzi phambi kokumisela iyeza kwaye aligqithise inyathelo elinokubangela iziphumo ezibi.
Kwimeko apho ufuna ukwenza iLinaclotide ithenge, kuya kufuneka wazi ukuba kumazwe amaninzi, kubandakanya ne-US, udinga unyango lukagqirha ukuze ufumane amayeza. Oku akujonganga nokuba unomdla wokuyithenga online okanye ngaphezulu kwikhawuntara.
Xa kuziwa kwindawo yokugcina, iqondo lokushisa elicetyiswayo leLinaclotide 851199-59-2 yi25 ° C (77 ° F). Nokuba ujongana ne-Linaclotide powder okanye iicaphule, iyeza kufuneka ligcinwe kwindawo engenamanzi kwaye, akufuneki ukuba lihlukaniswe okanye liphinde libhalwe kwakhona. Endaweni yoko gcina lonke ichiza kwisitya salo sokuqala.
Qiniseka ukuba isitya sivalekile ngokuqinileyo kunye ne-desiccant yaso ngaphakathi ukugcina umswakama.
Nokuba ufuna ukuthenga iLinaclotide 851199-59-2 yokusetyenziswa kwemizi-mveliso, iLinaclotide yentengiso okanye enye into esetyenziswayo yeLinaclotide, qiniseka ukuba uyayifumana kumthombo othembekileyo nothembekileyo. Ukuhlolwa kweLinaclotide kwi-intanethi kunokukukhokelela kumthengisi olungileyo.
Ngaphandle koko, ngaphandle kokwenza inkuthalo efanelekileyo, ukuba umthengisi ungaxhunyiwe kwi-Intanethi / kwi-intanethi ebanga ukuba inyanisekile I-Linaclotide iyathengiswa Unokuthengisa ukuthengisa iimveliso zekhontrakthi okanye ubambe imali oyifumene nzima.
Andresen, V., Camilleri, M., Busciglio, IA, Grudell, A., Burton, D., McKinzie, S.,… & Currie, MG (2007). Iziphumo zeentsuku ze-5 ze-linaclotide zothutho kunye nokusebenza kwamathumbu kubantu besetyhini abaneempawu zokuqhinwa ezingafunekiyo. Gastroenterology, 133(3), 761-768.
UChey, WD, Lembo, AJ, Lavins, BJ, Shiff, SJ, Kurtz, CB, Currie, MG,… & Baird, MJ (2012). I-Linaclotide yesifo samathumbu esichasayo sinokubanjiswa: iveki ye-26, i-random, blind-blind, ilingo elilawulwa nge-placebo ukuphonononga ukusebenza ngokukhuselekileyo kunye nokhuseleko. Ijenali yaseMelika ye-gastroenterology, 107(11), 1702.
Cuppoletti, J., Blikslager, AT, Chakrabarti, J., Nighot, PK, & Malinowska, DH (2012). Ukwahlula iimpembelelo ze-linaclotide kunye ne-lubiprostone ekubuyiselweni kwepropati yesithintelo se-epithelial cell kunye ne-homeostasis yeselula emva kokuvezwa koxinzelelo lweeseli. Ikhemesti ye-BMC, 12(1), 3.
Harris, A. (2013). I-LINACLOTIDE. Umcebisi.
UJohnston, JM, Kurtz, CB, Drossman, DA, Lembo, AJ, Jeglinski, BI, MacDougall, JE,… & Currie, MG (2009). Uphononongo lwenqwelomoya kwiziphumo ze-linaclotide kwizigulana ezinokuqunjelwa sisifo esinganyangekiyo. Ijenali yaseMelika ye-gastroenterology, 104(1), 125.
ULembo, AJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Lavins, BJ, Currie, MG, Fitch, DA,… noJohnston, JM (2010). Ukusebenza kwe-linaclotide kwizigulana ezinokuqunjelwa sisifo esinganyangekiyo. Gastroenterology, 138(3), 886-895.
I-Lembo, AJ, Schneier, HA, Shiff, SJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Jia, XD,… & Jeglinski, BI (2011). Izilingo ezimbini ezingahleliweyo ze-linaclotide zokugonywa okungapheliyo. I-New England Journal of Medicine, 365(6), 527-536.